के फ्लोरेन्स मा हेर्न यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | Florencia, के हेर्ने
Florencia यो सुन्दर इटालियन टस्कनीको राजधानी हो, एक प्राचीन, सुन्दर, रमणीय शहर संस्कृति र इतिहासले भरिएको। यहाँ सबै कुरा चाखलाग्दो छ र यसैले हरेक वर्ष लाखौं पर्यटकहरू यसलाई भ्रमण गर्छन्। कुनै चीजको लागि युनेस्कोले यसको ऐतिहासिक केन्द्र घोषित गरेको छैन विश्व सम्पदा।
तैपनि, त्यहाँ धेरै आगन्तुकहरू छन् जसले दुई वा तीन दिनहरू यहाँ बिताउँछन् र छोड्छन्। यो मेरो सल्लाह होईन, म विश्वास गर्दछु कि कम्तिमा चार दिन यात्रा गर्नुपर्नेछ जुन यात्रा गर्नुपर्नेछ र आराम गर्नु पनि पर्छ, बाइक चलाउन वा केवल हिंड्नु पर्छ। फ्लोरेन्समा के हेर्ने? Aim।
1 फ्लोरेन्स, मध्ययुगीन शहर
2 फ्लोरेन्स पर्यटन
फ्लोरेन्स, मध्ययुगीन शहर
मध्यकालीन समयमा फ्लोरेन्स यो इटाली मा वाणिज्य र वित्त को मुटु थियोमहाद्वीपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहरहरूमध्ये एक पनि छ। यो छ पुनर्जागरण को पालना, शक्तिशाली होस्ट गरिएको मेडिसी परिवार र सबै ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरू यहाँ छन्।
यसको ऐतिहासिक केन्द्र १ 80 .० को शुरुमा एक विश्व विरासत स्थल घोषित भएको थियो, तर यसको जरा मध्य युगमा नभई प्राचीन रोमको युगमा र त्यस भन्दा पहिले एट्रसकनको समयमा थियो।
भौगोलिक हिसाबले हेर्दा यो धेरै पहाडहरूले बनाएको खोलामा छ र यसको मुख्य नदी धमनी प्रख्यात छ आर्नो नदी जसको च्यानलमा त्यहाँ धेरै ब्रिजहरू छन्। यसको ग्रीष्म hotतु तातो छ, यसको वर्षा धेरै र यसको हिउँदहरु को साथ सधैं केहि सुरम्य हिउँ वर्षा संग।
खैर, पर्यटन को मामला मा हेर्न र गर्न को लागी धेरै छ, विशेष गरी ईतिहास र कला प्रेमीहरु को लागी। त्यहाँ छन् संग्रहालय, ग्यालरी, चर्च, वर्ग। संग्रहालयहरुबाट शुरू गर्दै, सूचीमा पहिलो हो Uffizi गैलरी, विश्व मा एक उत्तम कला संग्रहालय को एक।
Uffizi गैलरी एक प्रकारको सुन्दर कोठाले भरिएको लेबिरिंथ हो जुन अक्षर U को आकारको आकारको भवन भित्र लुकेको थियो। वास्तु शैली शैली यो हो पुनर्जागरण र यसलाई कोसिमो डे मेडीसीले जर्जियो वासारीको लागि निर्माण गर्ने आदेश दिइयो, राजनैतिक शक्तिको सीट पलाज्भो भेचियोको छेउमा। त्यो हो, यो संग्रहालयको रूपमा जन्म भएको थिएन तर पछि एक भयो जुन हजारौं र हजारौं मानिसहरूले दिनहुँ भ्रमण गर्छन्।
तिनीहरूको समयमा, केवल ड्युकल परिवार प्रवेश गर्न सक्थे किनकि यहाँ उनीहरूको बहुमूल्य कला संग्रह उनीहरू र उनीहरूका साथीहरू वा पाहुनाहरूका लागि प्रदर्शन गरिएको थियो: पुरानो सिक्का, पाण्डुलिपिहरू, रोमन मूर्तिहरू, गहनाहरू, Giotto र Cimabue, Masaccio, पावलो Ucecello वा Pietro डेला फ्रान्सेसा द्वारा चित्रहरु र ducal पोर्ट्रेट को आफ्नो संग्रह। शुक्रको जन्म यहाँ छ, विशाल को जस्तै एक वसन्त को Allegory ...
माइकलएन्जेलो, राफेल, दा भिन्सी, तिनीहरू अरू ठूला कलाकारहरू हुन् जुन तपाईंले यहाँ देख्नुहुनेछ। अन्तमा, एक विवरण: वसारी कोरिडोर युफिजि र पालाज्जो भेचियोलाई नदीको पट्टीमा पिट्टी प्यालेससँग जोड्दै। यो एक किलोमिटर लामो छ र १ half औं शताब्दीको उत्तरार्द्ध हो।
Uffizi ग्यालेरीमा प्रवेश गर्न १२ यूरो लाग्छ नोभेम्बर र फेब्रुअरी बीच र मार्च र अक्टुबर बीच २० यूरो। महिनाको पहिलो पहिलो आइतवार प्रवेश निःशुल्क छ। यो बिहान :20:१:8 देखि साँझ 15:6० सम्म खुल्छ। सोमबार बन्द हुन्छ।
अर्को सिफारिश संग्रहालय हो एकेडेमी ग्यालरी, जहाँ प्रसिद्ध प्रतिमा छ डेभिड माइकल एन्जेलो। थप रूपमा, तपाईले देख्नु भएको पहिलो चीज भनेको कोलोसीको तथाकथित हल हो, जुन आज ठूलो मूर्तिको साथ छ सबिन महिला अपहरण Giambologna द्वारा। त्यहाँ धेरै चित्रकलाहरू र स instruments्गीतका वाद्यहरूको राम्रो प्रदर्शन र गोथिक धार्मिक कलाको साथ कोठा पनि छन्। तर स्पष्ट छ, त्यो तारा डेभिड हो। यो बन्द हुनुभन्दा पहिले छिटो जान सजिलो छ किनकि यसले आफैंबाट मान्छे खाली गर्दछ र तपाईं एक्लो रहनुहुन्छ।
प्रवेशद्वारको मूल्य १२ यूरो छ र बक्स अफिस साँझ :6:२० मा बन्द हुन्छ। संग्रहालय बिहान :20:१:8 देखि साँझ 15:6० सम्म, मंगलबार आइतबार देखि खुला रहन्छ। सोमबारमा बन्द हुन्छ। तेस्रो संग्रहालय एउटा चर्च हो, जुन सान्ता मारिया नोभेलाको चर्च यसको विशेषता रंगीन संगमरमर अनुहारको साथ। यो शैलीमा गोथिक हो र यदि यसले बाह्यबाट तपाईंको ध्यान आकर्षण गर्दैन भने भित्र यो धेरै सुन्दर छ किनकि यसमा जिओट्टो, मासासिओ वा घिरल्यान्डियोले काम गरेको छ।
प्रवेश शुल्कeयूरो छ र प्रत्येक दिन खुला छ। हो, तपाईं फोटोहरू रेकर्ड गर्न वा लिन सक्नुहुनेछ, स्वाभाविक रूपमा फ्ल्यास बिना नै। हामीले नाम दिनु भन्दा पहिले पलाज्जो पिट्टी। यो विशाल छ र यदि तपाईंको विचार एक दिनमा यसको भ्रमण गर्ने हो भने तपाईंले बिहान आन्तरिक र दिउँसो यसको बगैंचाहरू गर्नुपर्छ। दुबै यसको लायक छन्! भित्र छ पलाटिना ग्यालरी, चार शताब्दी ducal भव्यता र राफेल र रुबेन्स द्वारा कला को काम संग धन। फ्रेस्कोहरू, ग्यालरीहरू र निजी शयनकक्षहरूको एक सौन्दर्य (ड्युकल अपार्टमेन्टहरू र शाही अपार्टमेंटहरू, उदाहरणका लागि), परिवार द्वारा प्रयोग गरिएको।
बाहिर छन् बोबोली बगैचा, विशाल र सुन्दर। तपाईं तिनीहरूलाई प्रवेश गर्ने बित्तिकै तिनीहरू मूर्ति र बाटोहरूको साथ एम्फीथिएटरको आकारका हुन्छन्, र जब तपाईं जानुहुन्छ तपाईं अर्को सानो स muse्ग्रहालय लुकाउन वा हिंड्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ र अन्य टेरेस्ड बगैंचाहरूमा पुग्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं पुग्न सक्नुहुनेछ। आर्नो र शहर हेर्नुहोस्। एक शानदार सवारी।
म व्यक्तिगत रूपमा सिफारिस गर्दछु पलाज्जो दावंजाटी। यो सस्तो र सानो, सरल, तर मनमोहक छ किनकि यसले तपाईंलाई फ्लोरोन्सियामा धनी परिवारको साझा जीवनको झलक दिन्छ। यो शाही दरबार होईन, त्यहाँ कुनै कलाको रचनाहरू छैनन्, तर तपाईले देख्नुहुनेछ मध्ययुगको शहरमा समृद्ध जीवन कस्तो थियोः शयनकक्ष, भairs्या,, भान्छा, भान्छ कोठा र स्नानगृहहरू। अर्को मोती हो डन्टे संग्रहालय लेखकको जीवन र उनका कार्यहरू (V Mara Margherita, १) वा सुन्दरको लागि समर्पित ग्यालिलियो संग्रहालय.
अन्य संग्रहालयहरु भ्रमण गर्न छन् बरगेल्लो संग्रहालय, लगभग सबै मूर्तिकला को लागी समर्पित, मेडिसी चैपलहरू जो सान लोरेन्जो चर्चको हिस्सा हो, केहि मेडीसी चिहानहरू छन् र माइकलएन्जेलोको हस्ताक्षर बोक्छन्। प्रवेश शुल्क 8 यूरो छ र बिहान :8:१:15 देखि अपराह्न5सम्म खुल्छ। त्यहाँ पनि छ ओपेरा डेल डुमोको संग्रहालय गुम्बजको निर्माणमा ब्रुनेलेस्चीले प्रयोग गरेको उपकरणहरूको प्रदर्शनको साथ।
र स्पष्ट रूपमा, तपाइँले यो जान्न रोक्न सक्नुहुन्न Baptistery र क्याथेड्रल। यसको गुम्बजमा चढ्न अमूल्य छ, यो गर्नुहोस्! सडक नै, संकीर्ण र विस्तृत, र महान दृश्यहरू सबै भन्दा राम्रो पुरस्कार हो। र यदि तपाईं बाइक भाँडामा लिनुहुन्छ वा बस लिनुभयो भने तपाईं शहरको माथिल्लो भागमा पुग्न सक्नुहुनेछ र सानो र मैत्रीलाई चिन्न सक्नुहुन्छ चर्च सान मिनियाटो अल मोंटे। विचारहरू महान छन् र यसको एउटा रोचक चिहान हो।
अन्तमा, फ्लोरेन्स शहर संग एक पर्यटक कार्ड छ, फायरन्ज कार्ड यसको मूल्य के छ 85 यूरो। सधै जस्तो यस कार्डको साथ तपाईले गणित गर्नु पर्छ यो उपयुक्त छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि। म फ्लोरेन्समा पाँच दिन बस्छु र सबै कुरा देख्दिन। त्यो हो, कि यसलाई किन्ने या नगर्ने मौलिक रूपमा तपाईंको रुचिहरू र तपाईं शहरमा रहनुभएको समयमा निर्भर गर्दछ। कार्ड यो hours२ घण्टाको लागि मान्य छ र एक संग्रहालय एक यात्रा अनुमति दिन्छ।
आज पनि छ फायरन्ज कार्ड +, E युरो अधिक, जसमा समावेश छ ट्राम र बसहरूको असीमित प्रयोग, एक संग्रहालय गाइड र एक झोला ल्याउनुहोस्। सत्य यो हो कि यदि तपाईं कम मौसममा शहर जानुहुन्छ भने, तपाईं केन्द्रमा रहनुहुन्छ र तपाईंलाई केवल सबै महत्त्वपूर्ण संग्रहालयहरूमा रुचि हुन्छ, तपाईंले यो किन्नुहुन्न। अब, यदि तपाइँ तीन दिन भन्दा बढी रहनुभयो भने, यदि तपाइँ धेरै भ्रमणहरू गर्न चाहानुहुन्छ वा यदि गर्मीमा धेरै मानिसहरू छन् भने, यो सुविधाजनक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » Florencia » के फ्लोरेन्स मा हेर्न